दशैमा क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्ने सवारीलाई कार्वाही गर्छाै – एसपी लम्साल - Purbeli News
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन १०, २०७४ समय: १२:२४:५०
एसपी राज लम्साल एक महिना पहिले एक नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा सरुवा भएर आएका हुन । आएदेखी नै उनि ट्राफिक व्यवस्थानमा अक्रामक रुपले सक्रृय भैरहेका छन । एसपी कार्कीले एक नम्बर प्रदेशका एआइजी पशुपति उपाध्यायको निर्देशन अनुसार अाफ्नाे क्षेत्रमा असोज पहिलो हप्तादेखी हर्न निषेध अभियान पनि संचालन गरिरहेका छन । एसपी लम्सालसँग एक नम्बर प्रदेशमा घोषणा भएको हर्न निषेध अभियान र चाडबाडको ट्राफिक व्यवस्थापनबारे गरेको संक्षिप्त कुराकानी …..
आएदेखी नै अक्रामक भएर ट्राफिक व्यवस्थापनमा लाग्नु भएको छ , किन ?
—म आंउदा पुर्वको ट्राफिक व्यवस्थापनको अबस्था ज्यादै भद्रगोल देखें। यसलाई समयमै व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । त्यसैले ट्राफिक व्यवस्थापनमा आंफु लगायत मातहत सबैलाई सक्रिय रुपमा परिचालन गरेको हुँ । अक्रामक भएको होइन , अलि सक्रृय भएर फरक ढंगले काममात्र गर्न खोजेको हुँ ।
आउनासाथ एक नम्बर प्रदेशमा हर्न निषेध अभियान घोषणा गर्नुभएको छ , प्रभाव कस्तो छ ?
–सवारी चालकमा सडक अनुशासन भन्ने कुरा अलिकती पनि देखिएन, गति नियन्त्रण गराई दुर्घटना न्यूनीकरण तथा ध्वनी प्रर्दुषणबाट हुने मानविय असर रोक्नको लागि १ नम्बर प्रदेशमा हर्न निषेध गरिएको हो । निषेध अभियान घोषणा भएपछि पहिले भन्दा हर्न बजाउने र तिब्र गतिमा चलाउने कार्यमा सुधार आएको छ ।
हर्न निषेध अभियानबारे के कस्तो प्रतिक्रिया प्राप्त भैरहेको छ ? हर्न निषेध अभियानबारे प्रतिक्रिया कस्तो छ ?
—आम नागरिकबाट समेत सकारात्मक कार्य भन्ने प्रतिक्रिया आएका छन ।हामीमा उत्प्रेरणा बढाएको छ । अब सबै अभियानमा केही न केही समस्या र चुनौती त आइहाल्छन नि , त्यसलाई फेस गर्दै जानुपर्छ ।
हर्न निषेध अभियान घोषणा गरेर नयाँ एसपी र एआइजीले सस्तो प्रचार खोजेको हो पनि भन्छन नि ?
–यो राम्रो काम गर्नेलाई हतोत्साहित गर्ने केही व्यक्तिको भनाई हुन सक्छ । जसले जे भने पनि ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि ऐन, नियम, कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कुनै पनि कसर बांकी रहदैन भन्ने कुरामा विश्वस्त छु । यसमा जस्तोसुकै चुनौती समाना गरेर पनि निरन्तर लागिरहन्छु । किनभने ट्राफिक व्यवस्थापन र सवारी दुर्घटनामा कमी आएमा फाइदा पुग्ने नागरिकलाई नै हो । समस्या आयो भन्दैमा आत्तिने प्रहरी म हैन । पक्कै थप उपलव्धि हासिल गरेरै छाडने छु ।
हर्न निषेध अभियान सफल बनाउन के गर्दैछ ट्राफिक प्रहरीले , भावि योजना के के छन ?
–हर्न निषेध घोषणा भएपछि एक महिनासम्म १ नं. प्रदेश भरी व्यापक रुपमा सचेतनाका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दैछौ । जानकारी मुलक बोर्डहरु राख्दै छौ । १ असोज २०७४ बाट हो एक नम्बर प्रदेश हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा भएको यसैले हामीले सचेतनासँगै कारवाहीलाई पनि सँगसंगै अगाडी बढाईराखेका छौ । अटेर गर्नेहरुलाई ५ देखी १५ सय रुपैया जरीवना गरिरहेका छौ । र भावी दिनमा ट्राफिक नियम उल्लघंन गरी सवारी संचालन गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरु तिब्र रुपमा अगाडी बढाउने योजना लिएका छौ ।
थानाको प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीको अनुभवमा फरक के हुदोरहेछ ?
–जनपद प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी दुबै नेपाल प्रहरी हुन । दुबैको काम कानून कार्यान्यन गर्ने र जनताको सेवा गर्ने भएकोले खासै भिन्न अनुभव भएको छैन । मात्र ट्राफिक प्रहरीको कार्य प्रकृती मात्र भिन्नै भएकोले काममा चाँही अलि नयापन महशुस भैरहेको छ ।
ट्राफिक प्रहरीमा खटिनु भएको छ , लक्ष्य के लिनुभएको छ ?
–ट्राफिक प्रहरीमा म बसुन्जेल मेरो लक्ष्य भनेकै आम नागरिकमा सचेतना अभिबृद्धी गराई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने र प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन मिलाउने , जनधनको क्षति विना निर्वाध रुपमा सवारी आवागमन सहज र सरल बनाउने मेरो मुख्य लक्ष्य हो ।
दशैमा बढी ट्राफिक उल्लंघन र सवारी दुर्घटना हुन्छन , किन होला ?
–देश विदेशमा छरिएर बसेका आम नेपाली दाजुभाई दिदी वहिनीहरु दशैमा घर आउने, किनमेल गर्ने हुँदा उक्त समयमा यात्रु तथा सवारीको चापमा बृद्धी हुनेगर्छ । र , यो समयमा यातायात व्यवसायीहरुले छोटो समयमा धेरै आम्दानी गर्ने सोचले गर्दा सवारी नियम उल्लघंन गर्ने कारणले बढी दुर्घटना पनि हुने गर्दछ । सवारीको क्षमता भन्दा बढी यात्रु चढाउनु , छतमा पनि यात्रु राख्नु , चाडबाडको बहाना बनाएर चर्को भाडा असुल्नु , चाँडो पुरयाउने बहानमा तीब्र गतिमा सवारी कुदाउनु , आम्दानी राम्रो हुने लोभमा पुराना र थोत्रा गाडीहरु पनि संचालनमा ल्याउनु आदि अनेक कारणले गर्दा चाडबाडको समयमा दुर्घटना बढी हुने गरेको हो ।
दशैमा सवारी दुर्घटना हुन नदिन के छन तँपाइका फरक योजना के छन ?
–दशैमा सवारी दुर्घटना हुन नदिन यात्रुमैत्री कार्यक्रम संचालन गराएका छौ । मा.प.से. चेकिङ्गमा कढाई गरेका छौ । तिब्र गति नियन्त्रण गर्न राडर गन सहितको चेकिङ्ग सुरु भएको छ । सचेतनामुलक पर्चा पम्प्लेट वितरण भैरहेका छन । सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने छौ , गरिरहेका छौ । लामो दुरीको सवारीमा २ जना चालक अनिवार्य राख्न लगाएका छौ । यात्रुको चापलाई मध्यनजर गरी सवारी साधन थप गर्न पहल पनि भैरहेको छ । विना रुट परमिट सवारी चल्न रोक लगाएका छौ । र यो सबै कार्यमा अटेर गर्नेलाई तत्काल कार्बाही हुने छ ।
ट्राफिक व्यवस्थापनलाइ फितलो बनाउन ट्राफिक प्रहरी आफै पनि जिम्मेवार छन भन्ने आरोप छ नि , कति सत्य हो ?
–यो समग्र ट्राफिक प्रहरीलाई हतोत्साहित गराउने षड्यन्त्र हो । एक दुई गल्ति कमजोरी भए भन्दैमा समग्र संगठनलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन ।
ट्राफिक व्यवस्थापनमा तँपाइले आम नागरिकबाट के आपेक्षा गर्नुभएको छ ?
–ट्राफिक व्यवस्थापन ट्राफिक प्रहरीबाट मात्र सतप्रतिशत सम्भव हुन सक्दैन । त्यसैले गर्दा आम नगरिकले हामीलाई साथ दिएर ‘होस्टेमा हैसे ’ गरी दिनु हुन्छ अपेक्षा गरेका छौ ।
ट्राफिक प्रहरीको दशै कसरी बित्छ , तँपाई चाँही कसरी दशै मनाउने योजनामा हुनुहुन्छ ?
–हाम्रो काम नै जनताको सेवा भएकोले दशैको अवसरमा आम नागरिकलाई सुरक्षित ढंगबाट सहज रुपमा गन्तव्यमा पठाउने कार्यमै ट्राफिक प्रहरीको दशै वित्छ । म यस क्षेत्रको ट्राफिक प्रहरीको प्रमुख भएकोले हामी प्रहरी व्यारेक सिस्टममा एउटै परिवारका सदस्य भएर रहनु पर्दछ । यसैले डियूटी आलोपालो मिलाई व्यारेकमै गच्छे अनुसारको दशै मनाई रमाईलो गर्दछौं ।